WA ogeysiisyada gaadhista abka casriga ah | Washington State Department of Health
WA Notify (Ogeysiisyada WA) (oo sidoo kale loo yaqaano Washington Exposure Notifications (Ogaysiisyada Qaadista Caabuqa ee Washington) waa aalad ku shaqaysa taleefannada casriga ah, adoon la wadaagin xogtaada shaqsiga ah, si aad ugu digto isticmaalayaasha kale haddii laga yaabo inay la joogeen dad qaba caabuqa COVID-19 ayadoo aan la wadaagin wax macluumad shaqsiyeed. Gabi ahaanba waa mid qarsoodi ah, mana taqaano qofka aad tahay iyo meesha aad aadayso.
Sidee ayaan WA Notify ugu shubayaa taleefankayga?
Markaad isticmaalayso iPhone, ka fur Exposure Notifications qaybta Settings (sitinka):
Hoos ugu deg Exposure Notifications
Guji “Turn On Exposure Notifications”
Markaad isticmaalayso Android:
Gal kaydka Google Play Store
Lasoo Dag barnaamijka WA Notify
Android-ka ama iPhone-ka, sawir koodhka QR:
Sidee ayay u shaqaysaa?
Markaad furato WA Notify, taleefankaaga ayaa la wadaagaaya koodhadh isku dhafan, oo qarsoodi ah taleefannada dadka kuu dhawdhaw ee ay sidoo kale u furan tahay aalada WA Notify. Barnaamijka wuxuu adeegsadaa teknoolajiyada ilaalinta-asturnaanta Bluetooth-ka ee Tamarta Yar si uu u isku-weydaarsado koodhkaan aan kala qaadka lahayn isagoo aan shaacinin wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Haddii qof kale oo isticmaala WA Notify oo kuu dhawaa labadii asbuuc ee lasoo dhaafay gudahood xili danbana laga helo caabuqa COVID-19 uuna koodhikiisa xaqiijinta gasho ablikeeshinka, waxaad heli doontaa ogaysiis qarsoodi ah oo kuu sheegaayo in laga yaabo inaad caabuqa qaaday. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay si dhakhso ah waxayna gacan ka gaysanaysaa kahortaga inaad caabuqa COVID-19 qaadsiiso dadka kale ee kuu dhawdhaw.
Algorithm-ka/Hadraaca ayaa kadhigaaya xisaabta in ay aqoonsato dhacdooyinka laga yaabo in ay suurtagal tahay gudbinta COVID-19 kuwa jooga masaafo ammaan ah ama ku filan oo aan u baahnayn in dignin lasiiyo. WA Notify ayaa ku soo wargelin doonta oo kaliya haddii ay suurtogal tahay in aad qaaday caabuqa. Markaa in aadan helin digniin waa aqbaar wanaagsan.
WA Notify waxaa lagu heli karaa in ka badan 30 luuqadood markaa dad badan oo suurtagal ah oo deggan Washington ayaa heli karaan qalabkaan.
Sida loo codsado koodhka xaqiijinta ee natiijooyinka baaritaanka guriga lagu sameeyo ee lagaaga helay COVID-19
WA Notify (Ogeysiiska U dhawaanshaha Caabuqa ee WA) Isticmaalayaasha iibsada boorsooyinka baaritanka ee dukaannada lagu gado kadibna natiijadoodu muujiso inay qabaan COVID-19 ayaa hadda ka codsan karta koodhka xaqiijinta aalada WA Notify.
Si aad koodhka xaqiijinta ugu codsato aalada:
Fur WA Notify kadibna dooro “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Nala wadaag natiijada baaristaada si aad nooga caawiso joojinta faafiyaanka COVID-19)”.
Dooro “Continue (Siiwad)” kadibna dooro “I need a code (Waxaan u baahan nahay koodh).”
Geli lambarka taleefanka aaladaada adeegsata WA Notify iyo taariikhda lagaa helay caabuqa COVID-19.
Dooro “Send Code (Dir koodhka)”.
Gal qaybta Settings (Settings-ka) kadibna fur Exposure Notifications (Ogaysiisyada La joogista Qof Caabuqa qaba).
Dooro “Share a COVID-19 Diagnosis (La wadaag Natiijada COVID-19 lagaa helay).”
Dooro “Continue (Siiwad)” kadibna dooro “Didn’t get a code (Ma helin miyaa koodh)? Booqo webseedka WA State Dept. of Health (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington).”
Dooro “Continue (Siiwad).”
Waxad heli doontaa ogaysiis soo boodaaya iyo fariin qoraal oo wadata lifaaqa xaqiijintaada. Waxaa kaliya ubaahantahay inaad furto ogeysiinta ama aad kudhufato lifaaqa kujira farriinta qoraalka si aad u raacdo tallaabooyinka kujira WA Notify si uu si qarsoodi ah ugu digo adeegsadayaasha kale suurtagalnimada udhawaanshaha caabuqa. Kadib markaad codsato koodhkaaga Xaqiijinta ee WA Notify, wac laynka tooska ah ee gobalku u sameeyay COVID-19, 1-800-525-0127, kadibna riix #, si aad ugu sheegto in caabuqa lagaa helay Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka).
Haddii aadan awoodin inaad ka codsato koodhka xaqiijinta WA Notify, waa inaad wacdaa laynka tooska ah ee gobalku u sameeyay COVID-19, 1-800-525-0127, kadibna riixdaa #, aad u sheegtaa shaqaalaha laynka inaad isticmaasho aalada WA Notify. Shaqaalaha khadka caawimaada ayaa ku siin kara lifaaqa xaqiijinta oo aad u adeegsan karto in aad udigto adeegsadayaasha kale ee WA Notify in ay cudurka la kulmeen.
Sida loo soo sheego in natiijadaada baaritaanka guriga laga helay cudurka COVID-19
Dadka soo iibsada qalabka baaritaanka oona baaritaankooda laga helo natiijo ah inay cudurka qabaan ah waa inay wacaan khadka caawimaada COVID-19 ee gobolka, 1-800-525-0127 kadibna riixaan # (riix 7 haddii aad ku hadasho Isbaanish), isla marka ay helaan natiijada. Booqo bogga Contact Us (Nalasoo Xariir) si aad u hesho saacadaha laynku shaqeeyo. Caawimaada luuqada ayaa la heli karaa.
Fadlan ogoow: WA Notify waa aalad loogu talagalay ogeysiinta la kulmitaanka cudurka. Looma qaabeynin in adeegsadayaasha ay geliyaan natiijada baaritaankooda.
Sidee ayaa loo difaacayaa sirtayda?
WA Notify waxaa lagu dhisay tignooloojiyada Ogaysiiska Qaadista Caabuqa oo ay sameeyeen Google iyo Apple, taasoo loogu talagalay in lagu difaaco xogta isticmaalaha. Waxay ka shaqeysaa qeybta hoose iyadoo aan uruurin ama shaacinin goob kasta ama xog shaqsiyeed, umana baahna in ay ogaato qofka ama meesha aad ka shaqeyso wax ku oolka ah. Adiga oo isticmaalaya kaliya qarxayada yaryar ee Bluetooth-ka, baytarigaaga ma saameyneyso.
Ka qaybgalkaagu waa ikhtiyaari gabi ahaanba. Isticmaalayaashu waxay ka qaybgeli karaan ama ka bixi karaan aalada markay doonaan. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ilaalinaayo sirta isticmaalaha, ka fiiri WA Exposure Notifications oo aad ka helayso xeerka asturnaanta.
Maxay u egyihiin farriimaha qoraalka iyo ogeysiisyada?
Waxaa jira labo nooc oo ogeysiin ah oo laga yaabo inaa hesho. Kuwa tijaabada boositifka noqdo waxay heli doonaan farriinta qoraalka ah ee linkiga xaqiiqsashada ah iyo/ama ogeysiinta shaashada kaaga soobaxeyso. WA Notify isticmaalayaasha kuwaas oo udhawaaday waxay heli doonaan ogeysiinta udhawaanshaha caabuqa. Baro wax badan oo ku saabsan ogeysiisyadaan iyo arag sida ay u eg yihiin.
Sidee ayay ii caawinaysaa?
Dhawaan Daraasaad ay sameysay University of Washington (Ingiriis oo kaliya) ayaa lagu oggaaday in hadba intay badan yihiin dadka adeegsada ogaysiiska qaadista caabuqu, ay sii kordhinayso faa'iidada aalada. Natiijooyinka waxay muujiyeen in WA Notify ay badbaadisay qiyaastii 40-115 oo nafo waxayna u badan tahay inay ka hortagtay illaa 5,500 kiisas oo COVID-19 ah afartii billood ee ugu horreysay ee la adeegsanayey. Xogta tijaabooyinkeeda waxay muujinayaan in xitaa tiro yar oo dad ah oo adeegsanaya WA Notify waxayna yareyn doonaan caabuqyada COVID-19 iyo dhimashada, WA Notify taas oo aalad aad u fiican oo looga hortago faafitaanka COVID-19.
Ma dooneysaa in aad ku caawiso wax ku saabsan faafinta hadalkan WA Notify (Barnaamijka Ogeysiinta La kulanka Qof Qaba cudurka)?
Kala soco WA Notify aaladeena ee fariimaha baraha bulshada, boodhadhka, xayeysiinta talafashinka iyo raadiyaha, iyo kuwa badan.
Su'aalaha kale ee inta badan la isweydiiyo
Ma heshay farriin iyo/ama ogeysiin ka timid Washington State Department of Health (DOH, Waaxda Gobalka Washington uqaabilsan Caafimaadka)? Sabab?
DOH waxay farriin qoraal ah iyo/ama ogeysiinta shaashada kaaga soobaxeyso udirtaa lambarada taleefanada ay adeegsadeen dadki dhawaan laga helay COVID-19. sidaa darteed isticmaalayaasha WA Notify ayaa si dhaqsi leh oo qarsoodi ah digniin ugu diri isticmaalayaasha kale ee qaadista caabuqa suurtagalka ah. Baro wax badan oo ku saabsan ogeysiisyadaan iyo arag sida ay u eg yihiin.
Haddii aad labadaba hesho, waxaa kaliya ubaahantahay inaad furto ogeysiinta ama aad kudhufato lifaaqa kujira farriinta qoraalka oo aadna raacdo tallaabooyinka kujira WA Notify si uu si qarsoodi ah ugu digo adeegsadayaasha kale suurtagalnimada udhawaanshaha caabuqa.
Miyaan u baahanahay WA Notify Haddii marhore la ii tallaalay?
Haa. Xitaa kadib marka aad si buuxda lagaaga tallaalo COVID-19, Weli waxaad u baahantahay in aad ku dhaqanto taxaddarada cudurka faafa ee caadiga ah. Tallaallada waa hab wax ku ool ah oo aad naftaada ku ilaalin karto, laakiin weli waxaa jira halis yar oo ah in uu kugu dhaco cudurka ama aad qaadsiiso kuwa kale oo aan la tallaalin.
Waxaan helay ogeysiis ku saabsan in xogtayda WA Notify aan ugu deeqo hay'ada caafimaadka dadweynaha. Sabab?
Washington State Department of Health (DOH), waxay dooneysaa inay ogaato sida wanaagsan ee WA Notify ay u shaqeyneyso si aan u sameyno wixii hagaajin ah ee looga baahan yahay aalada. Haddii aad oggolaato inaad nala wadaagto xogtaada WA Notify, qarsoodiga macluumaadkaaga ayaa weli si buuxda loo ilaaliyaa. Ma jiro macluumaad shaqsiyadeed oo la uruurinaayo ama la wadaagayo mana jiri doonto qaab laguugu aqoonsan karo. Kaliya DOH ayaa heli karta xogtaan waxaana lagu isticmaali karaa kaliya heer gobol.
Haddii isticmaalayaasha WA Notify ay oggolaadaan inay wadaagaan xogtooda, waa maxay xogta la uruurinayo?
Haddii aad ogolaato inaad nala wadaagto xogtaada, qarsoodiga macluumaadkaaga ayaa weli si buuxda loo ilaaliyaa. Ma jiro macluumaad shaqsiyadeed oo la uruurinaayo ama cid lala wadaagayo sidaas darteed ma jiri doonto qaab laguugu aqoonsan karo. Kaliya Washington State Department of Health ayaa arki karta xogtaan heer-gobol ah, kuwaas oo ay ku jiri doonaan:
Tirada dadka oggol inay xogtooda ku wadaagaan WA Notify. Tani waxay naga caawinaysaa inaan ogaanno waxa ay ka kooban tahay muunadeena.
Tirada Exposure Notifications cudurka ee ay heleen isticmaalayaasha WA Notify. Tani waxay naga caawineysaa inaan aragno isbaddellada faafitaanka COVID-19.
Tirada dadka gujinaya ogeysiiska muujinaya in qofka uu soo gaadhay cudurka. Tani waxay naga caawineysaa inaan sahaminno sida ay dadku u doonayaan inay tixgeliyaan/raacaan tallooyinka waaxda caafimaadka dadweynaha.
Tirada dadka ka agdhowaa qof iska baaray oo laga helay cudurka COVID-19, laakiin aan aad ugu dhowayn ama muddo aan dheereyn oo aan ku filnayn la joogey si loogu diro ogeysiiska soo gaadhista cudurka. Tani waxay naga caawineysaa inaan tixgelinno in algorithm-ka lagu go'aamiyo in qofku soo gaadhay cudurka ee aalada WA Notify ay tahay in wax laga baddelo.
Markii aan WA Notify ee ku jira taleefankayga aan ka shaqeeysiiyo, ma inaan badhanka "Availability Alerts (Digniinta Helitaanka)" shido oo aan demiyo miyaa?
Deminta way fiicantahay. In kastoo lagu taliyo in la shido haddii aad u safarto meel ka baxsan gobolka Washington waqti aad u badan. Marka ay "Helitaanka Digniinta" shidan tahay, waxaad heli kartaa ogeysiis markaad u safreyso meel laga isticmaalo teknoolojiyadda ogeysiiska soo-gaadhista cudurka ee aan ka ahayn WA Notify. dadka isticmaala iPhone waxay ku dari karaan gobollo badan laakiin waxay kaliya hal gobol ka dhigi karaan mid shaqeeya halkii marba. Uma baahnid inaad ka saarto gobol si aad uga shaqeeysiiso mid cusub. Dadka isticmaala Android sidoo kale taleefankooda u soo degsan karaan ablikeeshinada ogeysiiska bixiya markuu qofka cudurka soo gaaro sida WA Notify iyadoo jooga gobollo badan laakiin midka jooga keliya gobol isticmaalaya tikniyoolajiyad la jaanqaadi karta WA Notify ayaa shaqeyn kara halkii marba.
Ma qasab baa inaan Oggolaado isticmaalka WA Notify?
Haa. WA Notify waa lacag la'aan waana ikhtiyaari. Waad ka saari kartaa aaladaada markaad doonto. Kaliya dami aalada ama iska tir ablikeeshinka.Dhammaan koodhadhka iskudhafan ee taleefanku kaydiyo ee ka yimaada isticmaalayaasha kale ee kuu dhawaa ayaa la tiri doonaa dibna uma arki kartid.
Aalada WA Notify ma mid dabagal ku sameeysaa dadka kula joogay?
WA Notify ma qoro ama ma dabagalo xogta ku saabsan dadka aad la joogtay, marka ma sameeyo "dabagalka dadka la joogay qofka caabuqa qaba." Raadinta dadka kula joogay ayaa tilmaamaysa qof kasta oo laga helay cudurka COVID-19 oo laga yaabo inuu qaaday caabuqa. Ablikeeshinku ma aruuriyo ama ma gudbiyo wax xog shaqsi ah, marka suuragal uma ahan cidna inay ogaato qofka aad tahay iyo cidda aad la joogtay.
Waa maxay "qaadista caabuqu"?
Qadista caabuqa ayaa timaada marka aad waqti badan ag joogtay qof kale oo isticmaala WA Notify kaasoo mar danbe laga helo COVID-19. Tani waxay waafaqsan tahay tilmaanta hadda jirta ee kasoo baxday Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Kahortaga iyo Xakameynta Cudurada) (Ingiriiska oo kaliya) oo ku saabsan kala fogaanshaha iyo gudbinta caabuqa COVID-19. Si loo go'aamiyo qaadista caabuqa, WA Notify waxay adeegsataa hadraac/algorithm kaas oo la jaanqaadaaya qeexitaanka CDC xiriirka dhaw/istaabashada – qiyaastii 6 fiit gudahooda (2 mitir) muddo 15 daqiiqo ah ama ka badan inta lagu jiro xilliga faafa - waxaana hagaajin kara saraakiisha caafimaadka dadweynaha.
Maxaa dhacaaya haddii WA Notify ii sheegto in laga yaabo inaan caabuqa qaaday?
Haddii WA Notify ay ogaato in laga yaabo inaad qaaday caabuqa, ogaysiis kuugusoo dhacaaya taleefankaaga ayaa kugu hagaaya webseedka aad ka helayso xog ku saabsan waxa ay tahay inaad samayso tallaabada xigta. Tan waxaa ku jira sida iyo meesha aad iska baarayso, xog ku saabsan dhawrista badqabka adigga iyo dadka kula jooga, iyo xog ka jawaabaysa su'aalahaaga. Waa muhiim inaad akhrido aadna raacdo tilmaamaha ku qoran webseedka si taxadar leh.
Dadku ma ogaan doonaan haddii la iga helo COVID-19?
Maya. WA Notify cidna lama wadaago xog adigga kugu saabsan. Marka qof helo ogaysiis ku aadan qaadista caabuqa, wuxuu kaliya ogaan doonaa in qof uu la joogay 14 maalmood ee lasoo dhaafay laga helay COVID-19. Ma uu ogaan doono cidda qofku ahaa iyo meesha ay iskula joogeen.
Ma lacag ayaa la iiga rabaa WA Notify?
Maya. WA Notify waa lacag la'aan.
Sidee ayay aalada WA Notify u caawinaysaa gobalka Washington?
Dhawaan Daraasaad ay sameysay University of Washington (Ingiriis oo kaliya) ayaa lagu oggaaday in hadba intay badan yihiin dadka adeegsada ogaysiiska qaadista caabuqu, ay sii kordhinayso faa'iidada aalada. Natiijooyinka waxay muujiyeen in WA Notify ay badbaadisay qiyaastii 40 illaa 115 nafood waxayna u badan tahay in ay ka hortagtay qiyaastii 5,500 kiisas oo COVID-19 ah afartii bilood ee ugu horreysay ee la adeegsanayey. Xogta tijaabooyinkeeda waxay muujinayaan in xitaa tiro yar oo dad ah oo adeegsanaya WA Notify waxayna yareyn doonaan caabuqyada COVID-19 iyo dhimashada, WA Notify taas oo aalad aad u fiican oo looga hortago faafitaanka COVID-19.
WA Notify ma shaqaynaysaa haddii aan u safro meel ka baxsan gobalka?
Haa. Haddii aad u socdaasho gobal leh ab ku shaqeeya tignooloojiyadaha Apple/Google, taleefankaaga ayaa sii wadaaya inuu taleefanada isticmaalayaasha kale ee gobalkaas la wadaago koodhadhka isku dhafan. Ma jirto baahi ah inaad wax ka badesho settings ka abkaaga. Haddii aad ka maqnaato Washington muddo badan, waa inaad hubisaa dookhyada kuu furan ee gobalkaaga cusub si aad u hesho taageerada iyo digniinaha maxaliga ah.
Maxaan ugu baahanahay labadaba dabagalka dadka la joogay qofka caabuqa qaba iyo abka WA Notify?
Dabagalka dadka la joogay qofka qaba caabuqa ayaa ahayd talaabo caafimaadka bulshada oo waxtar lahayd tobanaan sano. WA Notify waxay si qarsoodi ah u taageeraysaa shaqadaan. Waa kan tusaale: Haddii lagaa helo COVID-19, Saraakiisha caafimaadka dadwaynaha ayaa kusoo wici kara kuna waydiin kara dadka dhawaan kula joogay. Ma magacaabi kartid qof aadan aqoon oo aad baska is ag fadhideen. Haddii labadiinaba aad isticmaashaan WA Notify, qofka aan la aqoon ee baska ayaa si qarsoodi ah loogu wargalin karaa qaadista caabuqa suurtagalka ah oo wuxuuna qaadi tallaabooyinka looga hortagaayo in COVID-19 uu ku faafo saaxiibadood iyo qoyskooda. Waa sida gacmo-dhaqashada iyo xirashada maaskaro mid walba ayaa gacan ka geysta joojinta faafitaanka COVID-19, marka la isku darana aad ayay u waxtar badan yihiin.
Muddo intee le'eg ayuu abka WA Notify ku qaataa ogaysiinta dadka kale ee isticmaala?
Isticmaalayaasha laga yaabo inuu ka qaaday caabuqa COVID-19 isticmaale kale ayaa heli doona ogeysiis 24 saacadood gudahood kadib markii adeegsadaha COVID-bositiifku raaco tallaabooyinka ku jira WA Notify si qarsoodi ah ugu digo isticmaaleyaasha kale ee WA Notify.
Ma suurtagal baa inaan helo dhawr digniinood oo ay iisoo dirto WA Notify?
Sidee ayaan ugu sheegayaa WA Notify haddii markaas la iga helay COVID?
Haddii caabuqa COVID-19 lagaa helo uuna qof ka socda Washington State Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka ee Gobalka Washington) ama waaxda caafimaadka dadwaynaha ee deegaankaaga kulasoo xariiro, wuxuu ku waydiin doonaa inaad isticmaasho WA Notify. Haddii aad tahay, waxay kuu soo diri doonaan lifaaqa xaqiijinta iyo/ama ogeysiin waxayna kaa caawin doonaan inaad raacdo tillaabooyinka si aad ugu gasho WA Notify. Lifaaqa ama ogeysiiska kuma xirna macluumaadkaaga shaqsiyeed. DOH ma laha hab ay ku ogaato qofka uu ku wargelin doono abku xog ku saabsan qaadista caabuqa markaad raacdo tallaabooyinkaan. Ogeysiiska qaadista caabuqa kuma jiri doonaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Dadka badan oo si qarsoodi ah u xaqiijiya natiijooyinkooda WA Notify, ayaa ah sida ugu fiican aan uga hortagi karno faafitaanka COVID-19.
Haddii lagaa helay caabuqa aadna wali doonayso inaad qaab qarsoodi ah ugu muujiso xogtaada aalada WA Notify, akhri qaybta “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Sida loo codsado koodhka xaqiijinta ee natiijooyinka baaritaanka guriga lagu sameeyo ee lagaaga elay COVID-19)” ee bogaan si aad u hesho tallaabooyinka aad ku codsanayso koodhka xaqiijinta si aad qaab qarsoodi ah ugu sheegto isticmaalayaasha kale ee WA Notify suuragalnimada ah inay caabuqa kaa qaadeen.
Kadib markaad codsato koodhkaaga Xaqiijinta ee WA Notify, wac laynka tooska ah ee gobalku u sameeyay COVID-19, 1-800-525-0127, kadibna riix #, si aad ugu sheegto in caabuqa lagaa helay DOH.
Ma jiraa wax aan u baahanahay inaan sameeyo kadib markaan ku daro WA Notify taleefankayga?
Talaabo dheeraad ah waxaa kaliya lagaa rabaa haddii:
Lagaa helay COVID-19, ama
Aad hesho ogaysiiska ah inaad la joogtay qof caabuqa qaba.
Haddii caabuqa lagaa helo, uuna qof ka socda Washington State Department of Health (DOH) ama waaxda caafimaadka dadwaynaha ee deegaankaaga kulasoo xariiro, wuxuu ku waydiin doonaa inaad isticmaasho WA Notify. Haddii aad tahay, waxay kuu soo diri doonaan lifaaqa xaqiijinta iyo/ama ogeysiin waxayna kaa caawin doonaan inaad raacdo tillaabooyinka si aad ugu gasho WA Notify. Lifaaqa ama ogeysiiska kuma xirna macluumaadkaaga shaqsiyeed. DOH ma laha hab ay ku ogaato qofka uu ku wargelin doono abku xog ku saabsan qaadista caabuqa. Ogeysiiska qaadista caabuqa kuma jiri doonaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Dadka badan oo si qarsoodi ah u xaqiijiya natiijooyinkooda WA Notify, ayaa ah sida ugu fiican aan uga hortagi karno faafitaanka COVID-19.
Haddii lagaa helay caabuqa aadna wali doonayso inaad ku muujiso xogtaada aalada WA Notify, akhri qaybta“How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Sida loo codsado koodhka xaqiijinta ee natiijooyinka baaritaanka guriga lagu sameeyo ee lagaaga elay COVID-19)” ee boggaan si aad u hesho talaabooyinka aad ku codsanayso koodhka xaqiijinta si aad qaab qarsoodi ah ugu sheegto isticmaalayaasha kale ee WA Notify suuragalnimada ah inay caabuqa kaa qaadeen.
Haddii WA Notify ay ogaato in laga yaabo inaad qaaday caabuqa, ogaysiis kuugusoo dhacaaya taleefankaaga ayaa kugu hagaaya webseedka aad ka helayso xog ku saabsan waxa ay tahay inaad samayso tallaabada xigta. Tan waxaa ku jira sida iyo meesha aad iska baarayso, xog ku saabsan dhawrista badqabka adigga iyo dadka kula jooga, iyo xog ka jawaabaysa su'aalahaaga. Waa muhiim inaad akhrido aadna raacdo tilmaamaha ku qoran webseedka si taxadar leh. Ogaysiiska kuma jirayaan xog ku saabsan cidda caabuqa ku qaadsiin kartay ama meesha. Gabi ahaanba waa mid qarsoodi ah.
Haddii aan isticmaalo WA Notify ma dhuuqaysaa dabka taleefankayga ama khadka interneetka simikaarka?
Maya. Waxaa loo sameeyay inay saamayn yar ku yeelato khadkaaga interneetka iyo dabka taleefankaaga ayadoo isticmaasha tignooloojiyada Bluetooth Low Energy.
Ma u baahanahay inaan mar kasta daaro Bluetooth ka si WA Notify u shaqeeyo?
Haa. WA Notify waxay adeegsataa Bluetooth Low Energy, marka Bluetooth ku waa inuu markasta u furnaadaa si aaladu usoo qabato dadka kale ee kuusoo dhawaada.
Ma qasab baa inaan aalada WA Notify u furo taleefankayga si ay u shaqayso?
Maya. WA Notify wuxuu ku shaqayn doonaa maskaxda taleefankaaga.
WA Notify maku shaqeeyaa taleefannada casriga ah ee hore?
dadka isticmaala iPhone waxay isticmaali karaan WA Notify haddii nidaamka ku shaqeeya taleefankaaga uu yahay:
iOS Nooca 13.7 ama mid ka dambeeyey (kuwa isticmaala iPhone 6s, 6s Plus, SE ama ka cusub)
iOS nooca 12.5 (kuwa isticmaala iPhone 6, 6 plus, 5s)
Dadka isticmaala Android ka waxay adeegsan karaan WA Notify haddii Android kaagu casriga ah ku shaqaynaayo aalada Bluetooth Low Energy nuqulka Android kuna yahay 6 (API 23) ama ka badan.
Ma qasab baa inaan jiro 18 si aan u isticmaalo WA Notify?
Maya. WA Notify ma yaqaano ama ma hubiyo da'daada.
Aaladaan ma shaqayn doontaa haddii aan taleefanka u dhiibo qof kale?
Wa Notify ma sheegi karto qofka isticmaalaaya taleefan waqtiga taleefanku u dhawaa qof caabuqa qaba. Haddii aad talefan cid kale wadaagtaan, qof kasta oo taleefanka isticmaalaha waa inuu raacaa tilmaamaha caafimaadka dadwaynaha haddii WA Notify sheegto in laga yaabo inaad la joogtay qof qaba COVID-19.
WA Notify ma ku shaqeeyaa aaladaha sida iPad ama saacadaha casriga ah?
Maya. Naqshada Ogaysiiska Qaadista Caabuqa waxaa si gaar ah loogu sameeyay taleefannada casriga ah kumana shaqaynaayo iPad yada ama taableetyada.
Muxuu gobalka Washington samaynayaa si uu ugu fududeeyo helitaanka tignooloojiyadaan dadka aan haysan taleefannada casriga ah?
WA Notify maaha aalada kaliya oo gacanta ka gaysanaysa kahortaga faafida COVID-19. Dabagalka dadka la joogay qofka caabuqa qaba iyo dadaalo kale ayaa faa'iido u leh qof kasta oo degan Washington, xataa haddii aysan haysan taleefan casri ah. Tallaallada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu joojin karo faafitaanka COVID-19, iyo xirashada maskarooyinka, kala fogaanshaha jirka, xaddidida baaxada kulamada ayaa ah qaabab kale oo qof walba uu gacan uga geysan karo joojinta faafitaanka COVID-19.
Lifeline program (Barnaamijka khadka-nolosha) ee dawladda federaalka wuxuu bixiyaa deynta biilka taleefanka bil kasta kuwa u qalma. Qaar ka mid ah kaqeybgalayaasha adeegga fiila-la'aanta ah ayaa laga yaabaa inay sidoo kale bixiyaan taleefanada casriga ah oo bilaash ah Xog badan oo ku saabsan barnaamijka, kuwaa soo u qalma, sida loo codsado iyo kaqeybgalka bixiyeyaasha fiila-la'aanta ah (Ingiriiska oo kaliya).
Xusuusnoow, qaadashada tallaalka COVID-19 ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu joojin karo faafitaanka.
Maxay ugu muuqataa WA Notify ay isticmaaleyso batariga dabkiisaugu badan?
Dhab ahaantii, sidaas maahan. Isticmaalka baytariga aaladdaada waxay muujineysaa boqolkiiba inta batteriga la isticmaalo maalin kasta oo ay ku jiraan inta uu isticmaalo ablikeeshinka WA Notify. Ablikeeshinada badankooda ma shaqeeyaan habeenkii. WA Notify sidoo kale ma shaqeeyo habeenkii, laakiin WUXUU hubiyaa lambarrada aan kala sooca lahayn dhowrkii saacadoodba mar si loo raadiyo isticmaalayaasha cudurka qaba si uu kaaga digo in cudurka uu ku soo gaaray in kale. Sidaas darteed, tusaale ahaan, haddii ablikeeshino kale aanan shaqeynin intaad jiiftid, WA Notify ayaa noqon doonta ablikeeshinka isticmaalay dabka bateriga boqolkiiba inta ugu badan muddadaas. Taas macnaheedu maaha ablikeeshinka WA Notify inuu isticmaalaayo dab badan oo batariga ah - kaliya waxay la micno tahay inuu isticmaalay boqolkiiba inta ugu badan ee dabka batteriga la isticmaalay.
Washington waxay kusoo saartay WA Notify in ka badan 30 luuqadood, markaa maxaan ugu arkaa kaliya Ingiriiska iyo Isbaanishka Bakhaarka Barnaamijyada Google Play?
WA Notify wuxuu ku shaqeeyaa luuqadda ku hagaagsan taleefanka isticmaalaha. Waxaa jira hal nooc oo WA Notify, laakiin wax kasta oo soo-baxa ogeysiis qaadista Caabuqa ah, tusaale ahaan - waxaa uu soo muuqan doonaa luuqadda uu jecelyahay isticmaalaha in ka badan 30 luuqadood oo gobolka Washington laga hirgeliyey.
Waxaan helay ogeysiis iyo / ama qoraal, laakiin qofka la baaray wuxuu ahaa qoyska ama xubin reerka ah. Maxay tahay inaan sameeyo?
WA Notify isticmaalaha laga helay cudurka waa inuu raacaa tillaabooyinka si qarsoodi ah ugu digo dadka kale ee laga yaabo in ay soo qaadeen, markaa waa in aad iska indho tirtaa qoraal kasta ama ogeysiisyada aan adiga lagugu talagalin.
Haddii qoyskaaga ama xubin qoyskaaga ah yahay isticmaalaha WA Notify, laga helay cudurka, oo welina u baahanyahay inuu xaqiijiyo natiijadooda WA Notify, waxay raaci karaan tallaabooyinka ku qoran qaybta “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Sida loo codsado koodhka xaqiijinta ee natiijooyinka baaritaanka guriga lagu sameeyo ee lagaaga elay COVID-19)” ee boggaan.
Dadka soo iibsada qalabka baaritaanka oona baaritaankooda laga helo natiijo ah inay cudurka qabaan ah waa inay wacaan khadka caawimaada COVID-19 ee gobolka, 1-800-525-0127 kadibna riixaan # (riix 7 haddii ay ku hadlaan Soomaali), isla marka ay helaan natiijada. Booqo bogga Contact Us (Nalasoo Xariir) si aad u hesho saacadaha laynku shaqeeyo. Caawimaada luuqada ayaa la heli karaa.
Waqti intee le'eg ayaan haystaa si aan u taabto ogeysiiska ama aan ku furto linkiga xaqiijinta?
Waxaad haysataa 24 saacadood kadib markii aad hesho ogeysiiska ama farriin qoraalka si aad u raacdo tallaabooyinka lagu ogeysiinayo dadka kale ee WA Notify. Haddii aadan awoodin inaad taabato ogaysiiska ama aad gujiso lifaaqa xaqiijinta waqtigaas gudihiisa, waxaad codsan kartaa koodhka xaqiijinta ee aalada WA Notify adoo raacaaya tallaabooyinka ku qoran qaybta “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Sida loo codsado koodhka xaqiijinta ee natiijooyinka baaritaanka guriga lagu sameeyo ee lagaaga helay COVID-19)” ee boggaan. Kadib markaad codsato koodhkaaga Xaqiijinta ee WA Notify, wac laynka tooska ah ee gobalku u sameeyay COVID-19, 1-800-525-0127, kadibna riix #, si aad ugu sheegto in caabuqa lagaa helay DOH. Waxaad sidoo kale aad codsan kartaa lifaaqa marka qof ka socda DOH ama waaxda caafimaadka dadweynaha deegaankaagu uu kula soo xariiro si uu kuugu sheego natiijooyinka baaritaankaaga COVID-19.
Maxay Washington u dooratay aaladaan?
Washington waxaa u dhisan kooxda kor joogtaynta, ayna ku jiraan khubarada ammaanka iyo adeegyada madaniga ah iyo xubno kasocda bulshooyinka kaladuwan, si ay dib u eegis ugu sameeyaan aaladaan Apple/Google. Kooxda ayaa ku talisay in aalada la dhaqan gasho ayadoo laga eegaayo waxtarka la xaqiijiyay ee aalada, difaaca adag ee xogta iyo inay gobalada kale adeegsadaan.
Sidee ayaan WA Notify ugu ogaadaa taarikhda u-bayla noqoshadayda?
Haddii aad isticmaalayso iPhone:
Gal Settings (Settings-ka)
Dooro Exposure Notifications (Ogeysiiska Udhawaanshaha Caabuqa) ama kagal Exposure Notifications (Ogeysiiska Udhawaanshaha Caabuqa) Qeybta Wax Laga Baaro
Taariikhdaada suurtagalka ay tahay inaad udhawaatay caabuqa ayaa lagugu tusi doonaa meesha kahooseyso “You may have been exposed to COVID-19 (Waxaa laga yabaa inaad udhawaatay/lakulantay COVID-19)”
Haddii aad isticmaalayso taleefan ah Android:
Fur ablikeeshinka WA Notify
Dooro See Details (Eeg Faahfaahinta) oo kahooseysa Possible exposure reported (U dhawaanshaha suurtagalka ah ee lasoo tabiyey)”
Taariikhdaada suurtagalka ay tahay inaad udhawaatay caabuqa ayaa lagugu tusi doonaa meesha kahooseyso “Possible Exposure Date (Taariikhda Udhawaanshaha suurtagalka ah)”